Wakhethwa zwi lomgangatho njengoko izinto, kudityaniswe umsebenzi processing phambili yodongwe, ubukhulu becala zisetyenziselwa platinum enyibilikisa, igolide, nesilivere, nobhedu kunye nenye iqondo lobushushu ingxubevange phezulu, ngobunyulu phezulu, anti-umhlwa, anti enamandla acid womelele kwealkali, lukhuni elungileyo, Njengokungeniswa high thermal nenkani. Icandelo eziphambili SiO2 ≥80%, Al2O3 (≤17%) kunye nezinye yi-3% (K2O, Na2O, Fe2O3), Akukho sihlwahlwaz emva amaxesha 10 ubushushu ngesiquphe nengqele ngesiquphe ngo 1100 ℃ ⇌ 20 ℃, yaye akukho ufa emva kwamaxesha 10 esebenzisa oxygen ukusika umpu ukutshiza 1700-1800 ilangatye leli ngokuyinyibilikisa.
Tho Iziko yokunyibilika dust, zwi ndiyabanyibilikisa Clay Iziko Manufacturers isitya igolide kunye platinum kuthelekiswa iimveliso ezifana kwi emarikeni, oko zinezibonelelo ebalaseleyo nanto ngokwemigaqo yokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njalo njalo, kwaye unobuhlobo igama elihle emarikeni. Xngtailong lushwankathela iziphene yeemveliso elidlulileyo iyaqhuba ukuphucula kuzo. Incazelo ye ngokuyinyibilikisa yokunyibilika tho dust, zwi ndiyabanyibilikisa Clay Iziko Manufacturers isitya igolide kunye platinum ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho.
Uyilo Xngtailong uxhomekeke yeqondo eliphezulu techs mveliso ezahlukeneyo. bonke CAD uyilo ipateni tech, 2D / 3D ishicilela zobuchwepheshe, yaye 3D wedijithali unyawo kwabantu collection imodeli tech ziye kwamkele kuyilo.
1.What na umgangatho package?
2.What uhlobo yesiqinisekiso onazo?
3.Uma iimveliso ezithile ingxaki umgangatho, ubuya kwenza njani na?
1.Equipment:We nelayini imveliso ngokupheleleyo kwakunye nezixhobo zivavanywa, kuquka umgca imveliso oluzenzekelayo.
2.Quality: Siye kudlule IS0 9001: 2005. standard, ezinzile, ethembekileyo
3.Price: iimveliso zethu thelekisa kakuhle kunye nabanye abarhwebi.
4.Philosophy: Nge Obusemagqabini ubunjani, inkonzo firt-class, neshishini
Max. Ubushushu Working
Modulus of uqhekeko
Ukungavumelani kwe Ukwandiswa Thermal
1. Phezulu ekulukhuni, kunye nokunganyangeki koxinzelelo yi-70MPA.
2. Ukunganyangeki okuphezulu kwe-therm
3. Iqondo lokusebenza lingamaqondo obushushu ngu-1350 ° C, iqondo lokusebenza lamaXesha liyi-1600 ° C.
4. Ubomi obude benkonzo, zilungele ukothuka kwe-thermal.
Siza kubonelela ngokuthe ngqo kwaye sisebenza ngokukuko kwaye sikhonze ngokwemizobo yabathengi.
Sineqela le-QC le-QC ukuqinisekisa ukuba imveliso yakho ilunge ngakumbi.
Jonga izinto ezingafunekiyo ngaphambi kokuqala kwemveliso.
Yiba novavanyo olungenamkhethe ngexesha lokuqhubekisa.
Yenza uvavanyo lwe-100% ngaphambi kokuthunyelwa.
Q: Ungaqala njani iprojekthi?
A: Ukuqala iprojekthi yakho, nceda usithumelele imizobo yoyilo ngoluhlu lwezinto, ubungakanani. Emva koko, uya kuyifumana intelekelelo kuthi ngaphakathi kwiiyure ezingama-24.
Q: Asiqhelananga nezithuthi zamanye amazwe, ngaba uza kujongana nayo yonke into yelo?
A: Ngokuqinisekileyo. Iminyaka emininzi iva kunye nexesha elide elinethuba elininzi elisebenzisanayo liya kusixhasa ngokupheleleyo. Ungasinika kuphela umhla wokuhambisa, emva koko uyakufumana iimpahla eofisini / ekhaya. Ezinye izinto ezixhalabisayo zisondela kuthi.